Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Airbus na -ebuga ụgbọelu ọhụrụ A220 ọhụrụ na Air France
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
A220 bụ naanị ebumnuche ụgbọ elu emebere maka ahịa oche 100-150 ma na-achịkọta teknụzụ ikuku kachasị ọhụrụ, ihe ndị dị elu na injin turbofan nke ọgbọ ọhụrụ Pratt & Whitney.
A220 bụ ụgbọ elu kachasị arụ ọrụ ma na -agbanwe agbanwe na mpaghara ahịa oche 100 ruo 150 taa.
A ga-arụ ọrụ Air France A220-300 mbụ na netwọkụ ikuku ya site na oge oyi 2021.
Site na oke ruru 3,450 nm (6,390 km220), AXNUMX na -enye ndị ọrụ ụgbọ elu agbakwunyere mgbanwe ọrụ.
Air France anatala A220-300 mbụ ya site na iwu maka ụdị ụgbọ elu 60 nke ụdị, iwu A220 kachasị site na onye na-ebu ụgbọ Europe. Enyere ụgbọelu ahụ site na ahịrị mgbakọ ikpeazụ nke Airbus dị na Mirabel, Quebec, Canada ma kpughere ọha n'ihu ọha n'oge emume emere na ọdụ ụgbọ elu Paris Charles-De-Gaulle.
Airbus A220 bụ ụgbọ elu kachasị arụ ọrụ na mgbanwe na ngalaba ahịa oche 100 ruo 150 taa. Mmeghari ụgbọ elu Air France nwere ụgbọ elu ọgbọ ọhụrụ a ga-abawanye arụmọrụ yana nkasi obi ndị ahịa ma kwado Air France iji mezuo ebumnuche gburugburu ya na ebumnuche nkwado ya.
Nke mbụ Air France A220-300 ga-arụ ọrụ na netwọkụ ikuku ya site na oge oyi 2021. Ugbu a, Air France na -arụ ụgbọ mmiri 136 Airbus ugbo elu. Air France na-emegharịkwa ụgbọ mmiri ya dị ogologo, wee burula ụzọ nyefee A11 n'ime usoro 350.
A na-ahazi ụlọ Air France A220-300 na nhazi klaasị iji nabata ndị njem 148 n'ụzọ nkasi obi. Na-enye nkasi obi dị elu nke otu ụzọ, yana oche akpụkpọ anụ sara mbara, windo ndị kacha ibu na ihe ruru 20% karịa ohere nchekwa maka onye njem, Air France A220 na-egosipụtakwa njikọ WiFi zuru oke n'ime ụlọ na oghere USB abụọ na oche ndị njem ọ bụla.
A220 bụ naanị ebumnuche ụgbọ elu emebere maka ahịa oche 100-150 ma na-achịkọta teknụzụ ikuku kachasị ọhụrụ, ihe ndị dị elu na injin turbofan nke ọgbọ ọhụrụ Pratt & Whitney. Site na oke ruru 3,450 nm (6,390 km220), A220 na -enye ndị ọrụ ụgbọ elu agbakwunyere mgbanwe ọrụ. A25 na -ewepụta ihe ọkụ ọkụ dị ala 2% na ikuku CO50 n'otu oche ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ọgbọ gara aga, yana nsị 50% dị ala karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, a na -ebelata akara mkpọtụ ụgbọ elu 220% ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ọgbọ gara aga - na -eme ka AXNUMX bụrụ ezigbo onye agbata obi gburugburu ọdụ ụgbọ elu.
Ka ọ na -erule ngwụsị Ọgọstụ, e nyefela ndị ọrụ 170 n'ụwa niile ihe karịrị 220 A11.